Ukutshona kwelanga okungenakulibaleka kwiChianti Terrace
IChianti Terrace B&B inendlu encinci enamagumbi okulala ama-2 anegumbi lokuhlambela labucala kunye nekhitshi kwi-villa ekwindawo yaseChianti iikhilomitha ezisi-8 ukusuka eFlorence, kwindawo entle yokubeka umhlaba, igadi enkulu ekhoyo enethafa elijonge indawo yaseChianti enetafile yokutyela, yokupaka yabucala.Kumgangatho ophantsi, ekhoyo kwiindwendwe kwaye kwabelwana ngayo nabanini, igumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo. Indawo La Romola (San Casciano val di Pesa).
Khawube nomfanekiso-ngqondweni ukwindawo entle eChianti, untywiliselwe emaphandleni, imizuzu engama-20 ukusuka eFlorence, engama-30 usuka eSiena nama-45 ukusuka elwandle, yaye ngorhatya, xa ubuya, ukutshona kwelanga okumangalisayo ethafeni, kurhabula iglasi yewayini.Ilungele kakhulu intsapho yabantu aba-3, kunye nesongezelelo se-4 iibhedi ezinokwenzeka.
Indawo entle enelizwe, eqaqambileyo kwaye ineentyatyambo, enembono entle kakhulu yaseChianti.
Kufuphi nelali kodwa kuthe cwaka kwaye kuyaphumla.
Siza kuba nakho ukukucebisa ngotyelelo olunika umdla, iimyuziyam zeencwadi, kunye nokhenketho lwaseSiena, San Gimignano, Pisa, Lucca, iindlela ze-eno-gastronomic kwiindlela zaseChianti kunye nezona ndawo zokutyela zikhethekileyo, ukuya kuthi ga kwindawo elungileyo. iglasi ngokuhlwa yewayini. kukhatshwa izitya emanxebani ingqele eqhelekileyo kunye netshizi (kunye kwamathandabuzo esisinyanzelo). Izifundo zokukhwela. Ukukwazi ukuqesha iibhayisekile zaseMountan.
Siza kuba nakho ukukucebisa ngotyelelo olunika umdla, iimyuziyam zeencwadi, kunye nokhenketho lwaseSiena, San Gimignano, Pisa, Lucca, iindlela ze-eno-gastronomic kwiindlela zaseChi…